Sorry works whenamistake is made, but not when trust is broken. So in life, makes mistakes but never break trust. Because forgiving is easy, but forgetting and trusting again is sometimes impossible.
လောကမှာရှင်သန်နေထိုင်ကြတဲ့ သက်ရှိလူ သားတွေအားလုံး ရာခိုင်နှုန်းပြည့် ထူးချွန်ကောင်းမွန်ပြည့်စုံမှုဆိုတာ မရှိနိုင်တဲ့အတွက် တစ်ခါတစ်ရံမှာတော့ အမှားတွေလုပ်မိ တတ်ကြပါတယ်။ တစ်ချို့တွေက မရည်ရွယ်ဘဲ အမှားတွေလုပ်မိတတ်ကြပါတယ်။ တစ်ချို့ကတော့ သိသိကြီးနဲ့ မဖြစ်မနေအမှား တွေကို လုပ်မိတတ်ကြပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာ ကိုယ်မှားသွားတဲ့အခါမှာ တောင်းပန်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားကလည်း အရေးပါတဲ့ အခန်းကဏ္ဍမှာ ပါဝင်လို့လာပါတယ်။
ကိုယ်မှားတာကို မှားတာသိလို့တောင်းပန်လိုက်တာမျိုးလည်းရှိသလို တောင်းပန်လိုက်ရင် ပြီးတာပဲ မှားချင်တာမှားစမ်းပါစေဆိုတဲ့ မှားယွင်းတဲ့အတွေးတွေဝင်နေတဲ့သူတွေလည်းရှိတတ်ကြပါတယ်။ လောကမှာ အရာခပ် သိမ်းမပြည့်စုံတဲ့သူတွေအဖို့ မှားတယ်ဆိုတာမဆန်းကျယ်ပေမယ့် မကြာခဏမှားနေမယ်။ အမှားပေါ်အမှားထပ်ဆင့်နေမယ်။ မှားတာကို မသိဘဲ ဆက်မှားနေမယ်။ အမှားကိုသိသိကြီးနဲ့ အမှန်ကိုမပြင်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ လူ့ဘဝအတွက် ကောင်းမွန်မှုဆို တာ မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။